China ụlọ ọrụ ATC osisi cnc 1325 na ndị na-emepụta | JCUT
1. A na-edebe ngwaọrụ iri na abụọ maka akwụkwọ ọrụ akpaka mgbanwe akpaka, na ngwaọrụ iri na abụọ nwere ike dochie kpamkpam iji rụọ ọrụ nhazi dị ike karịa.
2. Na nyocha nke ikpeazụ, a na-ebute abamuru nke lamino mepere emepe site na usoro njikọ njikọ a na-adịghị ahụ anya nke lamino nke enwere ike ịhazi. Uru nke njikọ lamino na-eme ka emeghe lamino mepere emepe ebe niile. E jiri ya tụnyere ụdị njikọ njikọ ndị ọzọ a na-adịghị ahụ anya, ụdị mgbakọ nke lamino njikọ a na-adịghị ahụ anya kachasị adaba ịwụnye na ikpokọta. Naanị ịkwesịrị itinye mpempe njikọ ahụ n'ime oghere mmapeja ahụ, efere abụọ ahụ na-agbanye ọnụ na ya.
3. Ọ na-ewe obere oge ijikọta arịa ụlọ na iberibe njikọta lamino, 1-2 mmadụ nwere ike mezue nzukọ nke arịa ụlọ niile, chekwaa oge na ọrụ. Ya mere, igwe na-egbutu Lamino na-ewu ewu karịa.
4. Aesthetics nke onye na-ejikọ lamino-usoro mkpọchi mkpọtụ, ihe mara mma; ihe nkwụsi ike na teknụzụ siri ike, njikọ siri ike; nkenke mfe-mgbakọ dị mfe na mgbasa, oge na-akparaghị ókè; a na - adịghị ahụ anya --- Kabọt ahụ bụ nke a na - adịghị ahụ anya, nke dị ezigbo elu; njirimara --- ihe okike zuru oke, iji efere ọ bụla.
Igwe a na-ete bọọlụ Lamino bụ igwe pụrụ iche e ji eme ihe iji gbue ma na-asụkwa ya. Ọ nwere ike tufuo ụdị ịkpụzi usoro ọdịnala ma dabere na ịrụ ọrụ ntuziaka. Ọ nwere ike nweta nrụpụta nwere ọgụgụ isi site na njikọ nke imewe, ịchụpụ na sọftụwia ụdị. Akụkụ Lamino adịghị ahụ anya bụ ụdị ọhụrụ nke ihe eji ejikọta oche; anyị niile maara na ụdị ihe eji achọ mma bụ nke ihe eji arụ ụlọ bụ ihe jikọrọ atọ nwere otu. Enwere ike ikwu na atọ n'ime ụlọ bụ ihe dị mkpa maka arịa ụlọ. Agbanyeghị, ihe-ụlọ ahụ nwere atọ nwere ụfọdụ adịghị ike pụta ụwa maka iji ya eme ihe, nke na-enweghị ike imeju ihe ndị ahịa chọrọ. Karịsịa mgbe ndị ahịa rịọrọ ka e mebekwu oche mgbidi akụkụ ma ọ bụ obere igbe nwere akụkụ, naanị atọ nwere ike ịme ya n'akụkụ aka nri.
Longteng ọgbọ nke R20 - hụrụ agụba + Linear ATC CNC Router
Length nkwado ogologo 2800 ịhazi
GDZ 9KW * 1 + hụrụ agụba
Usoro mmekọrịta Taiwan
Nke gara aga: Economic mẹrin usoro R4 osisi ịkpụ osisi
Osote: 1325 gbara mkpị na anọ ATC